Fampakaram-bady ho an'ny tanjona amin'ny vanim-potoana aorian'ny pandemika, ny fomba fikarakarana fampakaram-bady toerana fampakaram-bady, fampakaram-bady. C - Drafitra Sy Torohevitra
Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy Tsy Maintsy Jerena Fahasalamana Haingo Gynaec Lamaody Mpanambady Celeb Style Lakozia Maharitra Vaovao Momba Ny Lamaody Ao An-Tokantrano
Fampakaram-bady ho an'ny tanjona amin'ny vanim-potoana aorian'ny pandemika
Ny fampakaram-bady ho an'ny tanjona dia safidy tsara indrindra ho an'ny mariazy maro nandritra ny taona vitsivitsy izao. Ny areti-mandringana kosa dia nanakana ny drafi-dia nandritra ny fotoana kelikely. Ankehitriny rehefa nisokatra ny raharaha, na eo am-panokafana, dia dinihina indray ireo fampakaram-bady. Ny filan'ny ora dia ny fiarovana sy ny fahasalamana, ary izany dia manan-danja ihany koa amin'ny fampakaram-bady - na amin'ny tanàna na amin'ny fampakaram-bady. Aza adino izany ao an-tsaina, inona no tsy maintsy dinihina rehefa manomana mariazy haleha? Ilay mpamorona mariazy Ambika Gupta, mpanorina ary talen'ny famoronana The A-Cube Project dia manome fomba fijery iray.
Rehefa mametraka fampakaram-bady any amin'ny toeram-panambadiana, areti-mandringana na hafa, dia misy ny fotokevitra vitsivitsy mila antoka. 'Miantehitra amin'ny etos famolavolana eo an-toerana izay misy ary mamorona haingon-tarehy mahafinaritra mandrakariva ary manao ny rariny amin'ny antsipirian'ny trano iray' Manatsara ny volavolan-tsoratry ny habakabaka hanatsarana ny fanambadiana ho tsara tarehy indrindra. Zava-dehibe koa ny famoronana traikefa akaiky sy manokana hahafantaran'ny vahiny tsirairay ny manokana. ” Zava-dehibe ny mikaroha tsara ny toerana iray, hamaranana ireo famoahana voninkazo sy ekipa mpamokatra misy fotoana voatokana. 'Ny mpanjifa sy ny mpamorona dia tsy maintsy miasa miaraka amin'ny synergy mialoha mba hamaranana ny drafitry ny dia, ny logistika, ny haingon-trano raha mijery ny lalàna sy ny fitsipika ary ny toetrandro mba tsy hisian'ny fifanenjehana tampoka,' hoy izy nanampy. 'Ny fomban'ny fampakaram-bady lehibe sy lafo vidy dia ho eo foana, fa amin'ny salan'isa, ireo arivo taona dia miroso mankany amin'ny fampakaram-bady maharitra sy akaiky kokoa,' hoy izy nanamarika, 'misy dikany ny manambady amin'ny toerana lavitra satria ianao dia ny olona izay tena manadino anao fotsiny no tsy afaka manasa afa-tsy ny manery anao hanasa ny olon-drehetra fantatrao. ”
Fandinihana tanteraka ny toerana iray farafahakeliny iray volana talohan'ny fampakaram-bady lasa tena ilaina ankehitriny. Izany dia satria miova tsy tapaka ny fitsipika sy lalàna momba ny fiaraha-mikorana, tsy azonao atao ny mamela ny drafitry ny mariazy amin'ny minitra farany. 'Manoro hevitra ny mpandamina aho mba hijery toerana iray farafahakeliny telo andro alohan'ny andro lehibe hahazoana antoka fa efa misy ny fizahana kalitao rehetra, ny fomba fidiovana mandra-pahatongan'ny mpanjifa sy ny vahiny,' hoy i Gupta. Zava-dehibe ny famitana ny fametrahana haingon-trano farafahakeliny adiny iray na roa alohan'ny hetsika rehetra mba hahafahanao manadio zavatra alohan'ny fandraisana olona. Araho maso ny antsipiriany rehetra ary alao antoka fa ny mpiasa ao amin'ny hotely dia mitazona ny cutlery rehetra ao anaty paosy fa tsy misokatra. “Mamorona sarontava mahafinaritra, tazomy amin'ny toerana mora azo ny olona mahadio ary mailo hatrany ny mpiasan'ny sanitisation sao hahatsiaro tena ho voaro ny olona. Alao antoka fa voasedra mialoha sy voaro ny COVID-19 ireo vahininao alohan'ny hahatongavany, ”hoy izy nanamarika.
Ny zavatra manakiana iray hafa mila tadidintsika dia ny haben'ny toerana. Toerana kely sy claustrophobic misy olona maherin'ny 250 no hampitombo ny fihanaky ny valanaretina. Hamarino fa lehibe kokoa ny habaka noho ny isa natokana hialana amin'ny fitangoronana. Miaraka amin'ny isan'ny vahiny kely kokoa, safidy safidy maro no dinihina izao. “ Ny areti-mandringana dia nahatonga ny tsirairay hahita indray ny mety hisian'ny topografia indianina isan-karazany sy toerana itodiana eo an-toerana. Na dongom-pasika na fasika fotsy na riandrano na ala, misy toerana tonga lafatra any India isaky ny fampakaram-bady nofinofy, 'hoy i Gupta nanamarika,' Tsy ny trano fandraisam-bahiny misy kintana dimy ihany fa na ny trano fivarotana bizina aza izao no takiana satria ny isan'ireo vahiny efa nihena. . ”
Amin'ny maha drafitra azy dia ilaina ny mifanjohy hevitra amin'ny mpanjifa ary manazava fa isa vitsivitsy ihany no afaka manatrika fampakaram-bady miaraka amina protokol fandriam-pahalemana ao amin'ny toerana misy an'i Gupta izay mahatsapa fa misy isa tsara dia eo anelanelan'ny 150 ka hatramin'ny 200 na 250 ny olona, ​​'Tsy mihoatra izany, azo antoka!' Miaraka amin'ny isa kely kokoa, minimalism no fironana 'in' ho an'ny fampakaram-bady toerana izao. 'Raha ny fahitan'ny mpamolavola azy dia mahafinaritra ny mifantoka amin'ny nuansa sy manao tsipiriany kely amin'ny antsipiriany,' hoy i Gupta, 'Raha ny fahitan'ny mpanjifa azy dia tena mahafa-po tokoa ny mahita ireo olona ao amin'ny fampakaram-bady izay tena mahalala tsara izy ireo ary mifamatotra. Fankalazana akaiky kokoa izany ary faly ny olona satria mahafinaritra sy natao manokana izy io. ”
sarimihetsika fitiavana ambony Hollywood
Tehirizo eo alohanao ity lisitra fanamarinana nataon'i Gupta ity rehefa manomana ny mariazinao ianao!
Misafidiana toerana iray tsy manam-paharoa sy izay mifanaraka amin'ny tantarany manokana.
Alamino mialoha ny dianao, ny fomba fidiovana, ny fizahana ara-pahasalamana ary ny logistika fampiantranoana miaraka amin'ny lalàna sy fitsipika rehetra ao an-tsaina.
Hamarino tsara fa mora ny miasa ny fitantanana resort.
Omeo fotoana ampy ny drafitrao hampiharana zavatra araka ny tokony ho izy ary tadidio fa ny toerana tena lavitra na lavitra dia mety tsy mahazo alalana amin'ireo mpivarotra sy manam-pahaizana eo an-toerana hanampy amin'ny famokarana, jiro, feo, sns. mikorontana ka tadidio izany.
Tazomy ny vola kely sasany hanodinana voninkazo sy hizara sakafo fanampiny satria hahatonga anao hahatsapa ho tsara andraikitra amin'ny andraikitra ara-tontolo iainana.
Ataovy manokana ny traikefa momba ny fanomezana sy ny fitiavana mandray vahiny, ampidiro ireo mpanao asa tanana avy amin'ny ONG eo an-toerana hamorona vokatra voatahiry, hampiasa fitaovana sy fitaovana azo averina ary alaivo antoka fa tsy hanimba ny topografia sy ny tontolo iainana ny zava-mitranga.
Sary natolotray: The A-Cube Project
Vakio ihany koa: Fironana mariazy 2021: maharitra
Sokajy Levitra Celeb Style Mpinamana Sy Fianakaviana
sarimihetsika mifandraika amin'ny alika
ny fomba fanesorana ketrona amin'ny tanana
mpiara-miasa tsara indrindra ho an'i leo
fomba fahandro mora entina an-trano